Dowlada talyaaniga si eey u xakameyso culeeska ka imaan karo bandowga ka dhashay (COVID-19) waxeey dajisay nidaam saacidaayo bulshada inteeda taag daran , kuwooda anan shaqeen iyo familada caawinada dhaqaale u baahan.
Waxa uuka kooban yahay dhaqalaha ilaa 500 euro waxana dhibeyso INPS bishi abriil iyo bishi meey.
Waxad dalban kartaa hadi aad:
ila 23ki febraayo heysatay kontoraad 10 sacadood ka badan isbuuci
laga dhimay ugu yaran 25% shaqadi
qadan dhaqale kale sida lacagta eey dowlada dhiibto ee sida ceerta oo kale ah taso ugu badnaan gaarto 600 euro.
Codsigada u dirso hada shurudaha buuxiso INPS ama kaafka tag haku cawiyane.INPS
Sida ku cad sharciga eey dowlada soo saartay ee la dhaho Ka warqabka bulshada (sharci nambar 27 ee 2020) dhaman waxa la xanibay in la bixiyo lacagta guryaha iibsiga la yar yareen jiray ila 01da sebtenber 2020
COVID-19: KORDHINTA DHAQALE HEYNTA CARURTA IYO XARUMAHA KULELAHA
Kordhin ila 1200 euro (tii hore 600 euro) caawinada heynta ilmaha. Waxa dlaban karo waalidka heysta caruur ka yar 16 sano, kuwaso ka shaqeeyo xarumaha gaarka loo leeyahay ama kuwa dowldaba lakin wa qasab in aad ka shaqesaa caafimaad, ciidanka ama gargaarka dadka.Dhaqaalaha waxa lagu bixin karaa xarumaha ilmaha lau cayaarsiiyo, goobaha lagu haayo xili kuleelaha iyo waxbarashada guryaha loogu keeno macalin.
Waxey gudbisan karaan codsi dadka ka shaqeeyo goob aad uga fog hooygooda ama wax ka barta meel ka dheer gurigooda kuwasoo ku safro gaadiidka bulshada kasoo ku sugan xaladaha hoose:
a) Waa in aad heystaa icket sanadle ama bile ah kasoo aad cvadeen karto in aadna isticmaalin mudadi bandowga lagu jiray sida ku cad sharcga 23ki febraayo 2020 n. 6, iyo kii 25 ki maarso 2020.n.19:
b) Waxaad ku cadeen karta qoraal sida ku cad sharciga soo baxy 28ki disheembar 2000,n.445, kasoo kuu ogolanayo lakin masuliyada adiga lehqaladki ka imaado.
Waxaad geysa codsigada sharcikada aad ka gadatay6 tiketka aad rabtro in laguso celiyo kuwaso kuso kugu siin doono mid ka mid ah qababka hoos ku xusan.
- warqad aad ku safri karto mudo sanad gudahed ah lakiin ku dhaceyso mudadi adan isticmalin ki hore
- kaga oo eey kugu kordhiyaan mudadi aadan isticmaalin kiihore.
Qof walba oo qaangaar ah ee dagan magaalooyinka waa weyn iyo caasimadaha gobolada ama komuuneyaasha eey dagan yihiin dad ka badan 50.000 qof waxa loo ogolaaday in laga sacdo iibsi baaskiil tasoo laguso celinayo boqolkiiba 60dan lacagti kaga baxday taso anan dhaafi karin 500 euro ka bilabato 4ta bisha meey ( waxa la ansixiyay qodobkaan 26ki abrill 2020) wuxuna ku egyahay 31ka disheembar 2020 ku iibso:
Iibsiga baaskiil xita kan korontada ku shaqeeyo, ama midka lagu magacabo segway, ama kan iskiis u socdo ee loo yaqan hoverboard,waxaase ka baxsan gaari.
Dhaqalahan waxa la ogolyahay in aad dalbato kaliya hal mar mar labaadse ma jirto.
Ayadoo la tix racayo sharicga la dhaho Dib u dhaqajinta Italia familka heesto ISEE anan ka bacneed 40.000 euro waxa loo aqoonsaday dhaqale lagu saacido fasaxa sanadka 2020, dhaqaalaha waxa lagu bixin kara goobaha dalxiiska ee gudaha wadanka ah.sida hotelaa ama B&B.
Dhaqlahan waxa loo ogolyahay 1 qof oo familka ka mid ah dhaqale 500 euro familka oo dhan,dhaqalha waxa loo qeybiyay , cidiba waxa la sinayaa lacag lagu qimenayo inta qof eey yihiin tusale : Cida 2da qof ka kooban waxa lasinayaa 300 euro tasoo la micno ah qofkiiba 150euro.
1) dhaqalaha waxa lagu isticmaali karaa kaliya 1 mar oo isku bixis ah tasoo lagu bixin karo toos goobta dalxiis ee aag joogto.
2) Dhaqalaha wa in aad ku cadeesaa qaabka fatuurada ee onlineka ah ama warqado cadeenayo goobta ganacsi, kuwaso ku cad koodishe fiskalaha xarunta.
3) Dhaqaalaha lagu bixin karo gacan 3aad sida dalaal ama ajensi idiin dhexeeyo adiga iyo goobta aad dagantahay.
Dhaqaalaha waxa loo dhiiba marka hore 80% kadibna inta harsan 20% kasoo marka hore eey tahay in laguu ogolado.
Dhaqalaha xalada deg dega ah (REM) waa dhaqale loogu tala galay in lagu saacido familada tabaaleysan si looga saaacido xaalada COVID-19 Rem waa lacag 400 ilaa 800 yuuro ah qofkiiba, sharuudaha waa: Daganaansho talyaaniga ah, dhaqalaha kuso galo oo yar, ISEE aad soo sameysa kana yar 15000 yuuro sanadkii, Rem shaqo kuma lahan dhaqalaha kale oo eey dowlda ugu deeqday dadka xalada Covid19 darteed, mideeda kale shaqo kuma lahan dadka wayeelada ah ee qaato beeshanka ama kuwa qaata lacagaha cusub oo eey dowlada bixisay.
Codisga Rem waa in aad dalbataa ugu danbeyn Juun 2020.
Si aad warbixin uga hesho waxaad booqataa webseetka INPS ama tag kaafka ama wac nambarka lacag lanta ah ee ARCI.
Sharicga Caawinada: dhaqaale cusub oo lagu tagerayo shaqalaha
Dowlada waxeey diyaarisay dhaqale lagu saacidayo shaqalaha culuuska kasoo gaaray xalada Covid-19:
Kuwa iskood u shaqeesto, co.co.co, Shaqalaha anan qofna hoostagin, kuwa ka diiwan gashay xarunta AGO, shaqalaha xiliga fasaxa, kuwa dalxiiseyaasha u shaqeya waxey bishi maarso qateen 600 euro qofkiiba waxeyna qadanayaan 600 euro oo kale bisha abriil.
Shaqalaha beerhaa ee qatay bishi maarso 2020 600 euro bishan abriil waxeey qaadan doonaan 500 yuuro.
Shaqalaha iskood u shaqeeto oo eey soo gaartay qasaaro dhan ama ka badan 33% dhaqalihi haafka sanadka 2020 marka loo fiiriyo kii sanadki hore 2019 waxey heleyaan 1000 yuuro bisha meey, xita kuwa co.co.co ee iska qoray xarunta diwan galinta waxey heleyaan 1000 yuuro bisha meey.
Shaqalaha dalxiiska ee shaqadoodi eey is dhintay ayaga oo anan ka tagin laga bilaabo 01 janaayo 2019 ilaa 17 maarso 2020 waxey heleyaan 1000 yuuro mìbisha meey.
Nuucyo kala duwan oo shaqooyin ah ayaa waxaa saameeyay xaalada COVID-19 kuwaasoo qaarkood joojiyay shaqadi qaarna dhimay, waxey heli donan 600 yuuro bilaha maarso iyo abriil(kuwaso ah kuwo ka duwan kuwa an kor kuso xusnay ee dalxiiska iyo beeraha)
Shaqalaha cida u shaqeeyo waxeey heleyaan 500 yuuro bilaha abriil iyo meey bishiiba, hadi eey hestaan kontoraad hal ama wax ka badanba 10 saacadood isbuucle ah oo eeysana la nooleen masuulka shaqada.
Muhiim: qofii aanan dalban lacagta 600 yuuro ah ee bishii maarso waa inuu dalbadaa 15 maalmood gudahooda oo ka bilabata maalinka lasoo galiyo:hadii aadan fahmin tag kafka ama booqo webka INPS.
Dhaman dhaqalaha ana ka mid aheen kuwakor ku xusan, wixi aqbaar intaa dheer ama qaabka aad u dalban karto ama qofka dalban karo ama sida la isku diwaan galiyo wac nambarka bilaashka ah ee ARCI ama booqo webka INPS ama tag kaaf.
Dhaqaale loogu tala galay saacidaada dadka tabaaleysan kaasoo aad ku iibsan karto waxyabaha daruuriga ah sida cuntada iyo daawooyinka.
-- Sharciga n.658 kasoo xarunta ka warqabka bulshada iyo komuuneyaasha Talyaaniga u sahlay in eey helaan dhaqaale eey ku saacidaan bulshada tabaaleysan si eey adeeg ugu sameestaan.
Komuun walba waxa uu leeyahay qaab uuuku bixiyo dhaqalaha loo dhiibay. Waxa uuna si gooni ah u hor arin doonaa dadka heysta caruurta iyo kuwa anan soo galin dhaqaale kale. Sida lacagaha cusub ee eey dowlada ama qof shaqda laga joojiyay lakiin qaata lacag .
Sida ku cad sharciga qodobkiisa 27, comma 1, del D.Lgs 251/2007, Qaxootiga waxeey xaq u leeyihiin sida dadka wadanka udhashay oo kale ineey u qataan dhaqalaha lagu saacidayo dadka tabaaleysan.
Qaabka aad ku dalbaneyso ama aad ku heli kartid booqo wepsiteka komuunka aad dagantahay.